सफ्टेक मेलासातौं सुबिसु क्यान सफ्टेक मेलामा राखिएका सामान अवलोकन गर्दै सर्वसाधरण। तस्बिर : दिनेश गोले	यता आउनुहोसभृकुटीमण्डपमा बिहीबारदेखि सुरु भएको क्यान सफ्टेकमा राखिएको स्टनमा ग्राहकको प्रतिक्षामा बसेका युवतीहरु। तस्बिर: नागरिक	आइफोन-६एप्पलले मंगलबार सार्वजनिक गरेको बहुप्रतीक्षित आइफोन-६ मोबाइल। तस्बिरः एप्पल डटकम	इलोक्ट्रोनिक्स मेलाबर्लिनमा भइरहेको सबैभन्दा ठूलो उपभोक्ता इलोक्ट्रोनिक्स मेलामा एलजी इलोक्ट्रोनिक्सले ४ के ओएलईडी टिभी सार्वजनिक गरिदै। तस्बिर सौजन्यः सिजी	यस्तो छ आवरणन्युयोर्कमा ट्याब्लेट सर्फेसको कभर देखाउँदै कम्पनीका कर्पोरेट भाइस प्रेसिडेन्ट पानोस पान्ये। तस्बिर:एपी	ट्विटर १४० क्यारेक्टरको सीमितता हटाउँदैविश्वको प्रभावशाली सामाजिक सञ्जाल ट्विटरले प्रयोगकर्ताको सहजताका लागि केही नियम परिवर्तन गरेको छ। नयाँ नियमपछि ट्विटमा १४० क्यारेक्टरको सीमितता हट्नेछ। नयाँ नियमसँगै मल्टिमिडिया सामग्री फोटो, भिडियो ट्विट गर्न सकिनेछ। प्रयोगकर्ताबीच...	विकिपीडियामा कति विश्वास गर्नुहुन्छ?अनलाइनमा कुनै जानकारी चाहिएमा हामी विकिपीडियालाई सम्झिहाल्छौं। र त्यहाँ गएर आफूलाई चाहिने सूचना खोज्छौं। तर विकिपीडियामा हुने जानकारीलाई पूर्णरुपमा भने विश्वास गर्न सकिँदैन। किन भने विकिपीडिया पेजलाई जसले पनि सम्पादन...	एप डाउनलोड गर्दै हुनुहुन्छ? गोपनीयता गुमाउनु होला!नाम सुनेर वा त्यसबारे थाहा पाएर हामी विभिन्न एप डाउनलोड गर्छौं । स्मार्टफोनको सहजताले यी कुरा सजिलो पनि भएको छ । तर, हामीले यो सोच्दैनौँ कि यस्ता एप कति जोखिमयुक्त...	ट्विटर १४० क्यारेक्टरको सीमितता हटाउँदै
एजेन्सी Be the first to comment!	फेसबुकको सबैभन्दा लोकप्रिय अंगमध्ये एउटा हो– मेसेन्जर। एन्ड्रोइड तथा आइओएस एपका लागि फेसबुक मेसेन्जर एउटा नयाँ अपडेट ल्याएको छ। यो अपडेटपछि अब तपाइँले मेसेन्जरबाट ग्रुप फोन गर्नसक्नुहुन्छ। तपाइँको स्मार्टफोनमा यो नयाँ अपडेटको नोटिफिकेसन म्यासेन्जरले देखाइसकेको हुनुपर्छ। नदेखाएको भए छिटै देखाउनेछ। Read more... गुगल 'सर्चहिस्ट्री' कसरी डिलिट गर्ने?
20 Apr 2016 | 17:25pm बुधबार ८ बैशाख, २०७३
एजेन्सी Be the first to comment!	गुगलमा सर्च गरेको शब्द गुगलले सेभ गर्छ भन्ने कुराले तपाइँलाई टाउको दुःखेको छ? यसलाई कसरी हटाउने भन्ने विषय विश्वभरिकै गुगल प्रयोगकर्ताका लागि एउटा रोचक विषय हो। मान्छेहरु गुगलसँग आफ्नो धेरै निजी सूचना नहोस् भन्ने कुरा चाहन्छन्। किन कि गुगलले तपाइँको… Read more... 'क्यान्डी क्रस'को डरलाग्दो लत
15 Apr 2016 | 10:48am शुक्रबार ३ बैशाख, २०७३
नागरिक Be the first to comment!	फेसबुके साथीले पठाएको क्यान्डी क्रस खेल्ने आमन्त्रणसहितको 'नोटिफिकेसन'लाई पछ्याउँदै तपाईं पनि क्यान्डी क्रस खेल्न थाल्नुभएको त छैन? यदि थाल्नुभएको छैन भने के फुर्सदको दिन खेल्ने योजना बनाइरहनुभएको छ? यदि यस्तो योजना बनाउनुभएको छ भने होसियार हुनुस्। किनकि, तपाईं ठूलो र… Read more... Subscribe to this RSS feed